Abashayeli nabaphakeli | China Newest Window Conditioning 12V 24V Ultrathin Model Truck Parking Air Conditioners abakhiqizi nabaphakeli | UHollysen
Isimo Sewindi Esisha Esisha kunazo zonke 12V 24V Ultrathin Model Truck Parking Air Conditioners
Ihlobo elishisayo, elikhumbuleka kakhulu iloli. Abashayeli bamaloli basebenza kanzima emgwaqweni nsuku zonke, bazoba ngcono empilweni yabo. Noma ngabe kunezinhlobonhlobo zezinto zokupholisa ezenziwe ngomthunzi, Lapho belinde izimpahla endaweni yokupaka izimoto, bazothola i-filar kasilika epholile, vumela abangani bekhadi bathole indawo yokuphumula epholile futhi enethezekile.
Ukupaka umoya opholisayo, ukuxhasa amaloli, amaloli, imishini yokwakha. Ingakwazi ukuxazulula inkinga yamaloli nemishini yokwakha lapho iloli nenkalankala ukupaka endaweni. Ukusebenzisa i-DC12V / 24V / 36V ebhodini amandla webhethri yi-supplyfor car air conditioning. Ngaphandle kokuhlomisa ngemishini ye-generator; Uhlelo lwefriji lusebenzisa ifriji efrijini ephephile futhi eyonga imvelo ngu-R134A, ukuze i-air conditioner yokupaka ibe yomoya owonga amandla futhi olungele imvelo. Uma kuqhathaniswa nama-air conditioners wendabuko wendiza, ama-air conditioners wokupaka awadingi ukuthembela kumandla enjini yemoto, angagcina uphethiloli futhi anciphise ukungcoliswa kwemvelo.
Ngokuya ngocwaningo nempendulo yemakethe, ukufakwa kwendawo yokupaka umoya sekuphenduke umkhuba, hhayi kuphela okonga uphethiloli nemali, kepha futhi nokungcola okungu-zero nokukhishwa okungu-zero. Futhi ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla. Iyunithi yokupaka umoya efakwe ophahleni lwemoto, icompressor, isishintshisi sokushisa nomnyango wokuphuma uhlanganiswe ndawonye, ​​ikakhulukazi ukuhlanganiswa okuphezulu, okuhle ngokuphelele, ukugcina isikhala sokufaka, kungumklamo ovuthiwe kakhulu.
Ukupaka umoya wokupholisa umoya / Ukupaka okupholile / Roof phezulu iloli yokupaka air conditioner
I-HLSW-ZCKT16A / I-HLSW-ZCKT16B
Imoto, Tirakhi, Bthina, Rv, Bi-oat
Yakha ngokusho kokucaciswa komkhiqizo
Ivolumu yomoya evukayo
600㎥ / h
Ukupholisa ivolumu yomoya
Free 1 Year Unlimited Mileage Warranty
Ukubaluleka kokupaka umoya opholile:
1. Ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokupholisa zokushayela nge-roombasically;
2. Umsindo omncane, cishe ngeke uthinte abashayeli bamaloli abasele;
3. Ngokuqhathaniswa, izindleko zokusebenzisa injini ziphansi kunokuvula isimo somoya.
Izici zomshini ezenzelwe konke eziphezulu:
1. Ungalokothi udinga isibhakela, ngaphandle kokulimala komzimba wemoto;
2. Kuphuma umoya oshisayo nomoya opholile uwa, ukhululekile futhi unethezekile;
3. Ngaphandle kokuxhuma kwepayipi, ifriji ngokushesha.
Ukupakisha okungathathi hlangothi nebhokisi le-foam
Indawo yokuthunyelwa noma yokuthunyelwa
Isevisi eyenziwe ngezifiso: Siyakwazi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu, noma ngabe iqoqo elincane lezinhlobo eziningi, noma ukukhiqizwa okukhulu kwe-OEM ngokwezifiso.
1. Siza amakhasimende ukwenza izixazululo ezifanayo zesistimu.
2. Nikeza ukwesekwa kwezobuchwepheshe kwemikhiqizo.
3. Siza amakhasimende ukubhekana nezinkinga zangemva kokuthengisa.
1. Silokhu sikhiqiza ama-auto air conditioning compressors iminyaka engaphezu kwengu-15.
2. Ukubeka okunembile kwesikhundla sokufaka, ukunciphisa ukuphambuka, ukuhlangana kalula, ukufakwa ngesinyathelo esisodwa.
3. Ukusetshenziswa kwensimbi yensimbi enhle, ukuqina okukhulu, kuthuthukisa impilo yenkonzo.
4. Ingcindezi eyanele, ukuthuthwa okushelelayo, ukuthuthukisa amandla.
5. Uma ushayela ngejubane elikhulu, amandla okufaka ancishisiwe nomthwalo wenjini wehlisiwe.
6. Ukusebenza okubushelelezi, umsindo ophansi, ukudlidliza okuncane, i-torque encane yokuqala.
7. 100% ukuhlolwa ngaphambi kokubeletha.
I-Automechanika Shanghai 2019
I-CIAAR Shanghai 2020
Langaphambilini I-12V Auto A / C Compressor Manufacture Factory Ye-Subaru Impreza / Subaru Stella / Subaru Impreza XV
Olandelayo: Isimo Samaloli Sokulala Somhlaba Wonke 12v 24v Electric Car Parking Cooler Air Conditioners
12v 24v ephathekayo Universal Roof Phezulu egibele Tru ...
Universal Truck Sleeper Isimo 12v 24v El ...